‘समृद्ध कर्णालीका लागि बौद्धिक बहस आवश्यक’ – Karnalipati
‘समृद्ध कर्णालीका लागि बौद्धिक बहस आवश्यक’
सावित्री पाण्डे । २० फाल्गुन २०७६, मंगलवार मा प्रकाशित
सुर्खेत । कर्णालीको कला, साहित्य, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचानका विषयमा बौद्धिक बहसको कार्यक्रम ‘कुडा कर्णालीका’ सोमबारदेखि वीरेन्द्रनगरको बुलबुले उद्यानमा सुरु भएको छ । नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एक कार्यक्रमकाबीच उत्सव उद्घाटन गरेका छन् ।
उत्सव उद्घाटन गर्दै वन मन्त्री बस्नेतले कर्णालीको बिकासका लागि बौद्धिक बहस अपरिहार्य भएको बताए । उनले कर्णालीको स्रोत र साधनको उपभोगबाट कर्णाली समृद्ध बनाउन सकिने भएकाले त्यसको लागि प्रभावकारी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । ‘कर्णाली जस्ता पछाडि पारिएका क्षेत्रको बिकासका लागि संघीयता आवश्यक परेको हो’ उनले भने, ‘स्थानीय स्रोत साधनको उपभोग गर्ने प्रभावकारी योजना अवको आवश्यकता हो ।’
उद्घाटन समारोहमा कर्णाली सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले संघीयताले नागरिकहरुलाई घरदैलोमै सरकार दिए पनि कानून निर्माणमा भएको ढिलाईले अपेक्षाकृत बिकास गर्न नसकिएको बताए । ‘प्रचुर सम्भावना भए पनि सुन सिरानी राखेर नूनको खोजी गर्नु पर्ने कर्णालीको बाध्यता अन्त्य गर्न यहाँका सम्भावनाको खोजी गरिनु जरुरी छ’ उनले भने ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले कर्णालीको बिकासका लागि पर्यटन प्रबद्र्धन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । कर्णालीको प्राकृतिक सम्पदा, यहाँको संस्कृतिक पहिचानाले पर्यटक आकर्षण गर्न सकिने उनको भनाई थियो । ऋती फाउण्डेसनले आयोजना गरेको उत्सव तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । उत्सव सुरु हुनु अघि सोमबार बिहान वीरेन्द्रनगरमा साइकिल ¥याली समेत आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा कर्णालीको पहिचान दिने देउडा, गीत गजलहरु समेत प्रस्तुत गरिएको छ ।
विभिन्न चार शीर्षकमा बहस
‘संघीयताले सरकार त दियो तर सरकारलाई अधिकार नदिए पछि प्रदेश सरकारले जनताको आकांक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन ।’ कार्यक्रमको सुरुवातमै कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आफ्नो बह पोखे । नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कर्णालीले शासन पनि गर्न नसकेको र बलियो प्रतिपक्षको भुमिका पनि निर्वाह गर्न नसक्दा गरिब, विपन्न र विकटताको पर्याय बनेको बताए । चन्दनाथ नगरपालिका जुम्लाका प्रमुख कान्तिका सेजुवालले स्थानीय सरकार भए पनि कानूनी अड्चनले काम गर्न नसकिएको बतार्ईन् ।
‘कुडा कर्नाली’का नाम राखेर सोमबारदेखि वीरेन्द्रनगरको बुलबल उद्यानमा सुरु गरिएको कर्णाली उत्सवमा सहभागी वक्ताहरुले तीनै तहका सरकारहरुको पीडा सुनाए । ‘सरकारका तीन तह, बगाउन्या कर्णालीका बह’ शिर्षकको बहसमा तीनै सरकारका जनप्रतिनिधीले एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर बिकास गर्न नसकिएको दावी गरे । तिनै सरकारका अधिकारको सूची संविधानमै स्पष्ट गरिएकोले संघीय सरकारले काम गर्न दिएन भन्ने उचित नहुने वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले बताए । ‘संविधानले सबै तहका सरकारको अधिकार सूची स्पष्ट गरिदिएको छ’ उनले भने, ‘कुनै पनि सरकारले काम गर्न कुनै सरकारले रोक्ने कुरा आउँदैन ।’
संघीय कानूनहरु बनाउन भएको ढिलाईले प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई छ । ‘जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार भएकोले प्रदेश सरकारसंग जनताको अपेक्षा पनि धेरै छन्’ उनले भने, ‘तर सिंहदरबारले अधिकार दिन खोजिरहेको छैन । २० लाखसम्मको योजना पनि संघीय सरकारले बनाउन थाले पछि कसरी बिकास हुन्छ ?’ उनको प्रश्न थियो ।
चन्दनाथ नगरपालिका जुम्लाका प्रमुख कान्तिका सेजुवालले स्थानीय सरकारको नाम फेरएि पनि काम गर्नै वातावरण नभएको बताईन् । ‘स्थानीय सरकारमा कर्मचारी र कानूनी अड्चन अझै सकिएको छैन’ उनले भनिन्, ‘तर त्यसका लागि आवश्यक वातावरण संघीय सरकारले बनाउनु पर्दछ ।’ कर्णालीको बिकासका लागि पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य भएको भन्दै त्यसका लागि स्थानीय सरकारको योजनाले मात्र सम्भव नहुने उनको भनाई छ ।
कर्णालीको बिकासका लागि स्थानीय स्रोतको पहचिान र उपयोग गर्न नसकिएमा भने तीन जना वक्ता एकमत भएका छन् । कर्णालीको सम्भावना र सम्पाद चिनाउन सके मात्र पनि यहाँको बिकास गर्न सकिने उनीहरुको भनाई छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी अर्गानिक उत्पादन बढाउनु पर्ने, जलस्रोत, जंगल, जडिबुटीका सम्भावनाको पहिचान गरी उपयोगको नीति बनाउन तथा उद्योग र पर्यटकनको बिकासले कर्णालीको समृद्धि हाँसिल गर्न सकिने उनीहरुले बताए ।
पहिलो दिनको दोस्रो सेसनमा ‘खसका खासखुस’ शीर्षकमा बहस गरिएको थियो । खस भाषाका जानकार रमानन्द आचार्य, डा. बद्री चापागाई र डा. रमेश ढुङ्गेलले गरेको बहसमा १० औ शताब्दी देखि १६ औ शताब्दीसम्म खस सामाज्यका रुपमा परिचित कर्णाली क्षेत्र पछिल्लो समय विपन्नता, गरिबी र पछौटेपनले परिचित हुनु दुखद भएको बताए । खस भाषका जानकार रमानन्द आचार्यले नेपाली भाषाको र संस्कृतीको उद्गमस्थल कर्णालीको खस भाषा लोप हुने अवस्थामा पुग्नु दःखद भएको बताए ।
कर्णालीको बिकासका लागि यहाँको भाषा र संस्कृती जोगाउन जरुरी भएको आचार्यको भनाई छ । कर्णालीमा खस भाषा जोगाउन बिद्यालय तहदेखि खस भाषामा पाठ्यक्रम बनाई लागू गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘हामी भाषा भुल्दै गयौ भने हाम्रो पहिचान के रहन्छ ?’ उनको प्रश्न छ । डा. ढुङ्गेलले कर्णालीमा यूवाहरु उद्यमशिलाताको बिकास गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सके यूवा पलायन रोक्न र कर्णालीको भाषा संरक्षणमा मद्यत पुग्ने बताए ।
सोमबार पहिलो दिन ‘संस्कार र समानता’ शीर्षकामा सञ्जिव उप्रेती, उषा तितिक्ष र गीता कोइरालाले पत्रकार टिका बिष्टसंग बहस गरेका छन् । सानै देखि संस्कार सिकाउन सके सभ्य नागरिक बनाउन तथा सबै क्षेत्रमा सबै समुदायको सहभागिता बढाउन सकिने उनीहरुले बताए । कर्णालीको मौलिक कला साहित्य, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचानका बिषयमा बहस गर्न ‘कुडा कर्नाली’का सुरु गरिएको आयोजकले जनाएका छन् ।